Shinlay: Mohinga ( မုန့် ဟင်းခါး)
Posted by Shinlay at 15:29
Monhinga habe ich noch nie selber gekocht. Ich finde es irgendwie kompliziert zu kochen. Du bist gut.
Ich mag es ohne Erdnuss und dünne Suppe.
18 June 2010 at 15:44
Ich mag auch Monhinga. Aber habe ich es noch nie selber gekocht(အပေါ်ကရေးထားတာကို ကော်ပီးလုပ်တာ :D Ich möchte es jetzt essen...
တူနေပြီ..မရှင်လေး.ဒီနေ့ မုန့်ဟင်းခါးချက်တယ်။ အရည်ကျဲလေးပဲ။
Danke Shinlay !!!
ပဲမှုန့်မပါတာ ကြိုက်တယ်...ငါးဖယ်လည်း အရမ်းကြိုက်...
အကြော်မထည့်ပဲ နံနံပင်နဲ့ ငါးဖယ်နဲ့ မုန့်ဟင်းခါးအရည်ကျဲလေး သိပ်ကြိုက်သွားပြီ...တကယ်စားလိုက်ရသလိုပဲ...
မုန့်ဟင်းခါး လာစားပါတယ် အစ်မ..
တပွဲနဲ့ရဘူး။ ပွဲသေးလို့ နောက်တစ်ပွဲကျွေးပါဦး..
19 June 2010 at 01:32
19 June 2010 at 05:39
ပိတ်ရက်တွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အစားအစာတွေချက်ပြုတ်စားသောက်တော့ စိတ်ပျော်ရွှင်သွားပြီဟုတ်။